अन्तरिक्षमा होटल: यस्ता छन् सुविधा, प्रतिव्यक्ति कति लाग्छ खर्च ? - Birgunj Sanjalअन्तरिक्षमा होटल: यस्ता छन् सुविधा, प्रतिव्यक्ति कति लाग्छ खर्च ? - Birgunj Sanjalअन्तरिक्षमा होटल: यस्ता छन् सुविधा, प्रतिव्यक्ति कति लाग्छ खर्च ? - Birgunj Sanjal
अन्तरिक्षमा होटल: यस्ता छन् सुविधा, प्रतिव्यक्ति कति लाग्छ खर्च ?
१८ मंसिर २०७६, बुधबार ०५:२५
क्यालिफोर्निया । अन्तरिक्षमा पर्यटनलाई बढावा दिन धेरै कम्पनीहरूले पछिल्लो समय होटल निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अन्तरिक्षमा निर्माण गरिने यी होटेलहरूमा पर्यटकहरुका लागि सुविधाजनक कोठा समेत उपलव्ध हुने जनाइएको छ ।
साथै यी होटलमा तपाईंले टेनिस र अन्य खेलहरूको मजा समेत लिन सक्नुहुनेछ र यहाँबाट तपाईं आफ्नो मुटुमा पृथ्वीको दृश्य सजाउन समेत सक्षम हुनुहुनेछ। यसका लागि तपाईंले ठूलो पैसा तिर्नुपर्छ ।
१२ दिनको यात्रा
क्यालिफोर्निया एयरोस्पेस कम्पनी ओरियन स्पानले २०२४ सम्ममा यात्रुहरूलाई अन्तरिक्षमा लैजाने योजना बनाएको छ । यसका लागि सो कम्पनी ऊरोरा नामको स्पेस स्टेशन निर्माण गर्ने काममा जुटिरहेको छ।
यो क्याप्सूल आकारको स्पेस स्टेशन निजी विमानजत्तिकै ठूलो छ । यस स्टेशनमा केवल पाँच व्यक्तिहरू एक पटकमा जान र लगभग १२ दिनसम्म बस्न सक्ने जनाइएको छ । यसका लागि प्रतिव्यक्ति ९५ लाख डलर (७० करोड रूपैयाँभन्दा बढी) खर्च हुनेछ। स्टेशनमा पुग्ने यात्रीहरू वैज्ञानिक प्रयोगहरूको अंश बन्न सक्षम हुने समेत दाबी गरिएको छ । यो स्टेशनमा बस्ने व्यक्तिले एक दिनमा १६ सूर्योदय र सूर्यास्तका दृष्यहरू हेर्न र शून्य गुरुत्वाकर्षणमा टेबल टेनिस खेल्न सक्षम हुने जनाइएको छ ।
कम्पनीका संस्थापक फ्रान्कका अनुसार स्टेशनमा यात्रा गर्नका लागि ३० जनाले ८० हजार डलर (करीव ५७ लाख रूपैयाँ) जम्मा गरेर आफ्नो सीट बुकिङ गरिसकेका छन्।
चार सय मान्छेहरु सुत्न सक्षम हुनेछन्
क्यालिफोर्नियास्थित गेटवे फाउन्डेशन पनि ‘भोन ब्राउन’ नामको विशाल अन्तरिक्ष स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ र उ यो काम सफल हुने कुरामा आशावादी छ। सो कम्पनीले निर्माण गर्न थालेको अन्तरिक्ष स्टेशन (होटल) मा पर्यटकसहित अनुसन्धानकर्ता, डाक्टर र घरेलु सहयोगीहरू लगायत ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू सँगै सुत्न सक्षम हुने जनाइएको छ । सौर्य ऊर्जाद्वारा सञ्चालित, यो स्पेस स्टेशन एक ह्वील आकारको हुनेछ। जब यसलाई घुमाइन्छ, यसबाट पृथ्वीको एक तिहाइ कृत्रिम गुरुत्व सिर्जना हुन सक्दछ ।
नासा पनि पछाडि छैन
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले पनि अन्तरिक्षमा यो तयारी गरिरहेको छ । उसले जूनमा घोषणा गर्‍यो कि उसले दुई जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा लैजाने योजना बनाइरहेको बताउँदै आएको छ। नासाको यो योजनामा भने प्रत्येक यात्रीले एक रातको ३५ हजार डलर (करिब २५ लाख) रूपैयाँ तिर्नु पर्छ । यो एक महिनाका लागि लाग्ने शुल्क हो । नाशाको पहिलो मिसन २०२० मा सुरु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यी कम्पनीहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्
बोइङ, स्पेसएक्स र ब्लू ओरिजिन जस्ता कम्पनीहरूले पनि मानिसहरूलाई अन्तरिक्ष यात्रा गराउने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुको यो अभियानले अन्तरिक्ष व्यापारीहरूको लागि नयाँ मार्ग खोल्ने आशा गरिएको छ । तर समस्याहरू धेरै छन् । युकेस्थित ब्रिस्टल युनिभर्सिटीका अन्तरिक्ष इन्जिनियर प्रोफेसर लुसी बथ्राइडका अनुसार अन्तरिक्षमा होटलहरू बनाउन केही समय लाग्नसक्छ। उनका अनुसार यो अभियानमा लाग्ने कूल लागतले जो कोहीको लागि बाधा पैदा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यो अभियानका लागि हालका वर्षहरूमा धेरै कम्पनीहरू सुरु भएपनि केही कम्पनी असफल पनि भएका छन् । जसमा स्पेनको ग्यालेक्टिक सुइट र रूसको ओर्बिटल टेक्नोलोजी यो अभियान होस्ट गर्ने आफ्नो वाचा पूरा गर्न असफल भइसकेका छन् ।
कानूनले पनि अवरोध हुनसक्छ
अन्तरिक्षमा होटल निर्माण गर्न कानूनी बाधा पनि आउन सक्छ । सोही कानुन (बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि) अनुसार सन् १९६७ मा अन्तरिक्षमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण समेत गरिएको थियो । यस सन्धिअनुसार कुनै पनि देशले एकतर्फी रुपमा अन्तरिक्षका स्रोतहरूको शोषण गर्न पाउँदैन । यो सन्धि विशेषगरी अन्तरिक्षलाई हतियार मुक्त बनाउनका लागि बनाइएको हो, होटेल र छुट्टीको लागि होइन । यस सम्झौतामा अमेरिका, रुस लगायतका १ सय ५ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक: डेनिस टिटो
अमेरिकी व्यापारी डेनिस टिटो पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक हुन् । जसले २००१ मा रूसी सोयुज रकेट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनको यात्रा गरेका थिए । एक रिपोर्टकाअनुसार उनले यसका लागि बीस मिलियन डलर (लगभग एक अरब ४३ करोड रूपैयाँ) तिरेका छन्।